सियालिस साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने - औषधि जानकारी | अगस्ट 2021
समुदाय समाचार औषधि जानकारी चेकआउट प्रेस समुदाय, कल्याण औषधि बनाम मित्र समुदाय, कम्पनी कम्पनी कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> औषधि जानकारी >> सियालिस साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
सियालिस साइड इफेक्टहरू | रक्तचाप | साइड इफेक्टहरू कति लामो हुन्छ? | चेतावनी | अन्तर्क्रिया | कसरी साइड इफेक्टबाट बच्ने
Cialis (सक्रिय घटक: tadalafil) एक ब्रान्ड नाम पर्चेको औषधि हो कि ईरेक्टाइल डिसफंक्शनको उपचार गर्दछ, वा लक्षण र लक्षण एक बढाइएको प्रोस्टेट (सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया वा बीपीएच) को। एक फास्फोडीस्टेरेस प्रकार ((PDE5) अवरोधकर्ताको रूपमा वर्गीकृत, टेडालाफिल लि smooth्ग मा चिकना मांसपेशी र धमनी आराम गर्दछ।
Cialis ले अधिक रगत लि longer्ग अवधि को लागी erection कायम गर्न को लागी लिंग मा प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ। Cialis पनि सीधा कार्य को लागी काम गर्न यौन उत्तेजनाको आवश्यकता छ।
एक मूत्र पथ संक्रमण को लागी के राम्रो छ
सियालिसले सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासियाको तल्लो मूत्र पथ लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ। तल्लो मूत्र पथमा मांसपेशीहरूलाई आराम गरी BPH का लागि काम गर्ने सोचाइ रहेको छ।
आशा गर्न सकिन्छ, रगत वाहिनहरूलाई असर पार्ने औषधीहरूले नचाहिने साइड इफेक्ट र सम्भावित जोखिमपूर्ण ड्रग अन्तर्क्रियाहरू हुन सक्छ। Cialis विचार गर्ने व्यक्तिहरू यी साइड इफेक्टहरू र सम्भावित अन्तर्क्रियाको साथसाथै कुनै पनि मेडिकल अवस्थासँग परिचित हुनुपर्छ जुन औषधी अनुपयुक्त हुन सक्छ।
सम्बन्धित: Cialis बारे अधिक जान्नुहोस् Cialis छुट प्राप्त गर्नुहोस्
Cialis का सामान्य साइड इफेक्टहरू
सियालिसको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू हुन्:
पेट अस्वस्थ / पखाला
अ or्ग वा पाities्ग्रामा दुखाइ
नाक र ग्रसनीको सूज
सियालिसको गम्भीर दुष्प्रभाव
सियालिसले गम्भीर दुष्प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ जस्तै:
लामो समयसम्म निर्माण : दुर्लभ भए पनि, केहि व्यक्तिले लामो समयदेखि इरेक्शनहरू (चार घण्टा भन्दा लामो समयको निर्माण) वा प्रियापिजम (छ घण्टा भन्दा लामो समयसम्म पीडादायी इरेक्शन) रिपोर्ट गरेका छन् जब सियालिससँग मिल्ने ड्रग्स लिन्छन्। दुबै लामो ereitions र priapism आपतकालिन चिकित्सा उपचार प्राप्त गर्नु पर्छ। प्रियापिजमले इरेक्टाइल टिश्यूहरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्दछ यदि यसलाई अहिले नै उपचार गरिएको छैन।
अचानक दृष्टि गुमाउनु : गैर-आर्टरिटिक एन्टेरियर ईस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी वा एनएओएन रिपोर्ट गरिएको छ - विरलै नै people मानिसहरू ट्याडलाफिल जस्ता औषधी लिनेहरूमा। एनएओएनले एक वा दुबै आँखामा अचानक कमी आउन वा पूर्ण क्षतिको कारण हुन सक्छ। तुरुन्तै ड्रग रोक्नुहोस् र आपतकालीन चिकित्सा सहायता पाउनुहोस् यदि तपाईंले दृष्टिमा परिवर्तन देख्नुभयो भने।
अचानक सुन्ने वा सुन्ने क्रममा कमी : सुनवाई गुमाउने सियालिसको साथ रिपोर्ट गरिएको छ र चक्करमा वा कानमा घण्टी बजाएर सँगसँगै आउन सक्छ। तुरुन्तै ड्रग रोक्नुहोस् र आपतकालीन चिकित्सा सहायता पाउनुहोस् यदि तपाईंले सुनुवाई हानि याद गर्नुभयो।
हृदय घटनाहरू जस्तै बेहोश हुनु, छाती दुख्ने, हृदयघात, वा स्ट्रोक : धेरै जसो (तर सबै होईन) जोसँग Cialis लिने बखत गम्भीर हृदय घटनाहरू थिए पूर्व-अवस्थित जोखिम कारकहरू थिए।
कम रक्तचाप (हाइपोटेशन): ताडालाफिलले रक्तचाप कम गर्दछ, त्यसैले कम रक्तचाप सम्भावित साइड इफेक्ट हो।
गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रियाहरू: दुर्लभ तर गम्भीर (र सम्भावित घातक) अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाहरू Cialis को कारण पित्ती, स्टीभन्स-जॉनसन सिन्ड्रोम, र एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस समावेश गर्दछ।
सियालिसले रक्तवाहिनीमा हल्का कम मांसपेशीहरूलाई आराम दिन्छ। यसको कारणले गर्दा, कम रक्तचाप, वा हाइपोटेशन, समस्या हुन सक्छ। हाइपोटेंशनलाई रक्तचाप भनेर परिभाषित गरिन्छ जुन डिप्स हुन्छ पारा mm ०/60० मिलिमिटर मुनि (mmHg )। सबैभन्दा न्यूनतम, कम रक्तचापले मानिसलाई बेहोस, झर्ने र घाइते हुने गर्दछ। यदि रक्तचाप धेरै कम भयो भने, महत्त्वपूर्ण अंगहरू असफल हुन सक्छ, जसको परिणामस्वरूप मृत्यु हुन सक्छ।
ताडालाफिलको चरण III क्लिनिकल परीक्षणहरूमा, कुनै बिरामीहरूले (99of मध्ये) क्लिनिकल हाइपोटोन अनुभव गरेनन्। चरण III अध्ययनमा ताडालाफिलको सुरक्षाको मूल्यांकन गर्दा जब रक्तचाप कम गरिन्छ (एन्टिहाइपरटेन्सिव भनिन्छ) ड्रग्स, यो संयोजनले केवल थोरै रक्तचापको जोखिम बढायो। जब दुई वा सोभन्दा बढी एन्टिहाइपरटेन्सेभ लिन्छ, ताडालाफिलले हाइपोटोनेशनको घटना बढाउँदैन।
कम रक्तचापको अर्को रूप ओर्थोस्टेटिक हाइपोटेशन हो, जुन यो द्वारा विशेषता हो रक्तचापमा अचानक गिरावट त्यो एक व्यक्ति बसिरहेको वा झूट स्थितिबाट खडा हुँदा हुन्छ। जबकि अक्सर हानिरहित, लाइटहेडनेस, ओर्थोस्टेटिक हाइपोटेशन भन्दा थोरै उत्पादन गर्दछ गम्भीर परिणाम हुन सक्छ यसको कारणमा निर्भर गर्दै। अध्ययनमा (माथि उल्लेख गरिएको) जुन यस मुद्दामा केन्द्रित थियो, ताडलाफिललाई ओर्थोस्टेटिक हाइपोटोनमा कुनै पनि क्लिनिक प्रासंगिक प्रभावहरू फेला परेनन्।
Cialis साइड इफेक्ट कहिले सम्म रहन्छ?
सियालिसको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू अस्थायी हुन्छन् र औषधी बन्द गरेपछि केही घण्टा वा दिनहरूमा कम हुन्छन्। केहि, जस्तै टाउको दुख्ने, कम्मर दुखाई, र मांसपेशियों को पीडा मुख्य कारणहरू थिए प्रारम्भिक क्लिनिकल परीक्षणहरूमा थोरै मानिसहरू सियालिस प्रयोग गर्न रोके।
अन्य साइड इफेक्टहरू, जस्तै गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रियाहरू, लामो ईरेक्शन, प्रियापिजम, श्रवणशक्ति हराउने, र हृदय घटनाहरूलाई तत्काल मेडिकल ध्यान चाहिन्छ र दीर्घकालीन ध्यान आवश्यक पर्दछ। गम्भीर तर दुर्लभ सम्भावित प्रतिकूल घटनाहरू जस्तै प्रिियापिजमको कारण इरेक्टाइल टिश्यूलाई क्षति पुर्‍याउने, श्रवणशक्ति हराउने, हृदयघात, वा स्ट्रोकको आजीवन परिणामहरू हुन सक्छन्। दृष्टि घाटा NAION को कारण हुन सक्छ स्थायी हुन ।
Cialis contraindication & चेतावनी
Cialis सबै पुरुषहरूको लागि सही औषधि नहुन सक्छ, विशेष गरी किनभने हृदय प्रणालीमा यसको प्रभाव को कारण। Cialis पुरुषहरूको लागि contraindated छ:
टाडालाफिलको लागि गम्भीर गम्भीर अतिसंवेदनशीलताको साथ
गम्भीर किडनी रोग (रेनल कमजोरी) वा डायलिसिसमा पुरुषहरूसँग
गम्भीर कलेजो रोगको साथ (हेपाटिक कमजोरी)
नाइट्रेट्स लिन्छ वा गुयनालेट साइक्लास उत्तेजकहरू
केही व्यक्ति Cialis लिन सक्छन् तर चिकित्सा अवस्था हुन सक्छ कि सावधानी, कि हो, होसियारी अनुगमन र एक सम्भावित खुराक कटौती आवश्यक छ। यसमा समावेश छन्:
हल्का देखि मध्यम मिर्गौला रोग
हल्का देखि मध्यम कलेजो रोग
केहि हृदय समस्याहरू
उच्च कोलेस्ट्रॉल (hyperlipidemia)
गैर-आर्टेरिटिक एन्टेरियर ईस्केमिक न्यूरोपैथी (एनएओआईएन) को इतिहास वा जोखिम कारकहरू जस्तै अप्टिक डिस्क क्राउडिंग
Penile विकृतिहरू जस्तै Peyronie रोग, cavernosal फाइब्रोसिस, वा एन्गुलेसन
कुनै पनि सर्त जसले priapism को जोखिम बोक्छ जस्तै सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया, वा बहु myeloma
यस अनुसार डेलीमेड एमोयोकार्डियन इन्फ्रक्शन, एन्जाइना, हाइपोटेशन, स्ट्रोक वा अनियन्त्रित एरिथमियास वर्तमानमा वा हालसालैको बिरामी जस्तो कार्डियोवास्कुलर बिरामीहरूले Cialis लिनुहुन्न किनकि सुरक्षा र प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्न कुनै क्लिनिकल अध्ययन गरिएको छैन।
Cialis र अन्य निर्माण कार्य औषधी (EDMs) को मनोरन्जनकारी प्रयोग हो अचम्मको कुरा, विशेष गरी युवा पुरुषहरू जो यौन सक्रिय छन् बीचमा। साइड इफेक्टको जोखिम बाहेक, EDM ड्रग्सको दुरुपयोग गर्ने पुरुषहरूले जीवनशैली छनौट गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ जसले तिनीहरूलाई यौन संक्रमित रोगको लागि बढी जोखिममा पार्दछ र सम्भावित औषधी अन्तर्क्रिया अन्य अवैध वा मनोरन्जनात्मक औषधीहरू जस्तै पप्परहरूसँग।
त्यहाँ केहि अनिश्चितता छ कि औषधि जस्तै ताडलाफिलले शारीरिक निर्भरता, सहिष्णुता, वा फिर्ती निम्त्याउँछ। सहमति दृष्टिकोण यो हो कि तिनीहरू गर्दैनन्। EDM निर्भरता सम्बन्धित जीवनशैली विकल्पहरूबाट अलग गर्न यो विशेष रूपमा गाह्रो छ। EDMs दुरुपयोग गर्ने धेरै पुरुषले मनोरन्जनात्मक औषधिहरू पनि प्रयोग गर्छन् जसले Erectile dysfunction निम्त्याउन सक्छ, EDM को पुरानो प्रयोग आवश्यक बनाउँदछ। अत्यधिक सक्रिय यौन जीवनशैलीलाई EDMs को पुरानो वा उच्च-खुराकको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ।
सियालिस जस्ता लागूपदार्थ जसले शारीरिक निर्भरता वा फिर्ता लिन सक्दैन दुरुपयोग र व्यवहार निर्भरता । मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरहरूले यस अवस्थालाई पदार्थ दुरुपयोग डिसआर्डरको रूपमा निदान गर्छन्, जुन एक औषधिको दुरुपयोगले सम्बन्ध र कामकाजमा कत्ति बिरामी गर्दछ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। केहि अवस्थाहरूमा, मनोरन्जनकारी प्रयोग वा ताडालाफिलको दुरुपयोगले निश्चित रूपमा पदार्थ दुरुपयोग विकारको निदानको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्छ। सफलतापूर्वक दुरुपयोग अन्त्य गर्न उपचार आवश्यक पर्दछ।
सियालिस कहिल्यै १ 18 बर्ष भन्दा कम उमेरका मानिसहरूलाई दिइनु हुँदैन।
सियालिस महिलामा प्रयोगको लागि अनुमोदित छैन।
निर्माताले मात्र उमेरमा आधारित खुराक समायोजनको सिफारिश गर्दैन। जहाँसम्म, Cialis को उचित खुराकको निर्णय लिँदा उमेर र अन्य सर्तहरूको पूर्ण तस्वीर ध्यानमा राख्नु पर्छ।
Cialis खाना बिना वा बिना लिन सकिन्छ। यद्यपि यसको मतलब यो होइन कि सियालिस सँगसँगै लैजान सकिन्छ सबै खाना अंगूरमा पदार्थहरू छन् जुन शरीरको टेडालाफिलको मेटाबोलिज्मलाई धीमा गर्दछ। यसले शरीरलाई औषधी तोड्नको लागि लामो समय लिन्छ, त्यसैले रगतमा टेडालाफिलको एकाग्रता माथि जान्छ, साइड इफेक्ट बढी सम्भावना सिर्जना गर्दछ।
टेडालाफिल लिने पुरुषहरूले पनि रक्सीको सेवन सीमित गर्नुपर्दछ। सियालिस जस्तै, रक्सीले रक्तचाप कम गर्दछ। सियालिसको साथ धेरै रक्सीको मिश्रणले गम्भीर रूपमा निम्न रक्तचाप निम्त्याउन सक्छ। एफडीए सिफारिश गर्दछ कि Cialis लिदा प्रति दिन चार भन्दा बढी पेय छैन, तर तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग तपाइँको अन्य शर्तहरु र / वा औषधि लिई मा आधारित मदिरा सेवन को एक सुरक्षित रकमको बारेमा जाँच गर्नुहोस्।
Cialis का धेरै औषधि अन्तर्क्रियाहरू हुन्छन् जब पुरुषहरू औषधि लिने बेलामा सचेत हुनुपर्दछ।
नाइट्रेट्स ONT संकुचित: नाइट्रेट्स छाती दुख्ने (एनजाइना) को उपचार गर्न प्रयोग गरिने औषधी हुन्। उनीहरू सियालिससँग मिल्दोजुल्दो ढ act्गले कार्य गर्दछन्। तिनीहरूले आणविक (चक्रीय गुनोसिन मोनोफॉस्फेट) को स्तर बढाउँछन् जसले धमनी मांसपेशीहरूलाई आराम दिन्छ। धमनीहरू द्रुत रूपमा चौडा हुन्छन्, रगत प्रवाह मुटुमा बढ्न दिईन्छ। नाइट्रेट्स समावेश छ नाइट्रोग्लिसरीन , nitroprusside, isosorbide mononitrate, र isosorbide dinitrate। सियालिससँग नाइट्रेट्सको संयोजनले रक्तचाप यति गम्भीर रूपमा कम गर्दछ कि त्यसले हृदयघात वा स्ट्रोकको परिणाम दिन्छ। यदि नाइट्रेटहरू कहिले चाहिन्छ भने, तिनीहरू सियालिसको अन्तिम खुराक पछि hours 48 घण्टा सम्म प्रयोग गर्न सकिदैन।
गुयनालेट साइक्लेज (GC) उत्तेजकहरू — प्रतिबद्ध: Gial उत्तेजक लिने मानिसहरूलाई Cialis कहिले पनि दिइदैन सास पास (riociguat) वा Verquvo (vericiguat)। एडेम्पासले पल्मोनरी धमनी उच्च रक्तचापको उपचार गर्दछ (धमनीहरूमा उच्च रक्तचाप जो हृदयबाट फोक्सोमा जान्छ)। Verquvo पुराना हृदय विफलता संग केहि बिरामीहरु मा प्रयोग गरीन्छ। जीसी उत्तेजकहरूले सिआलिस र नाइट्रेट्स जस्ता धेरै तरीकाले काम गर्छन् कि धमनीहरूलाई चौडा पार्ने रसायनलाई बढाउँदै। संयोजन जोखिमले गम्भीर कम रक्तचाप निम्त्याउँछ।
नाइट्राइट्स: नाइट्राइट नाइट्रेट्स जस्तै छन्। तिनीहरू धमनीहरूमा चिल्लो मांसपेशीहरूलाई आराम दिन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई टाडालाफिलसँग मिलाउँदा निम्न रक्तचापको जोखिम बढ्छ। नाइट्रिट्स केहि मनोरञ्जनात्मक औषधिहरूमा पाइपर्स भनिन्छ फेला पार्न सकिन्छ, एमिल नाइट्राइट वा बूटिल नाइट्राइट सहित।
ईरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्रग्स (EDMs): हाइपोटेंशन र अन्य साइड इफेक्टहरू बढी जोखिममा छन् यदि सियालिस अन्य इरेक्टाइल डिसफंक्शन औषधीहरूसँग प्रयोग गरियो जुन सियालिस जस्तै PDE5 अवरोधकहरू हुन्। यी औषधिहरू, जो समावेश छन् भियाग्रा (sildenafil) र Levitra (vardenafil), Cialis लिदा बेवास्ता गर्नु पर्छ।
रक्तचाप औषधिहरू (antihypertensives): सियालिसलाई औषधीहरूसँग जोड्नुमा कि कम रक्तचापले कम रक्तचापको सानो जोखिम निम्त्याउँछ, त्यसैले उपचारहरूमा रक्तचापको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। डोज कहिलेकाँही परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्दछ। अन्य ड्रग्स, जस्तै ओपियोड्स, एन्टिडेप्रेससन्ट, र एन्टिसाइकोटिक औषधिहरूले पनि रक्तचाप कम गर्न सक्दछ, त्यसैले रक्तचाप निगरानीको आवश्यकता पर्न सक्दछ जब तिनीहरू सियालिससँग मिल्दछन्।
अल्फा ब्लकरहरू: अल्फा-ब्लकरहरू उच्च रक्तचाप वा विस्तारित प्रोस्टेटको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। कम रक्तचापको जोखिमको कारण, सियालिसलाई यी औषधीहरूसँग मिसाउन सिफारिश गरिदैन।
CYP3A4 अवरोधकर्ताहरू: अंगूरबाहेक, धेरै औषधिहरूले ताडालाफिलको मेटाबोलिज्मलाई सुस्त पार्दछन् इन्जाइम ब्लक गरेर, CYP3A4, जसले टाडालाफिललाई बिच्छेद गर्दछ। यी औषधीहरूले केही प्रकारका एन्टिबायोटिक, केही प्रकारको एचआईभी औषधी, केही प्रकारका एन्टिफंगलहरू समावेश गर्दछन्। केटोकोनाजोल र itraconazole), केही प्रकारको बेंजोडाइजेपाइनहरू, र केही प्रकारको corticosteroids। Tadalafil एक मजबूत CYP3A4 अवरोधकर्ताको साथ संयोजनले गम्भीर साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ। Cialis को एक कम खुराक आवश्यक हुन सक्छ।
CYP3A4 inducers: वैकल्पिक रूपमा, केहि औषधिहरूले शरीरको टेडालाफिलको मेटाबोलिज्मको गति बढाउँछन्, सियालिस खुराकको फाइदा कम गर्दछन्। CYP3A4 inducers भनिन्छ, यी औषधिहरूले गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्दैन। CYP3A4 inducers को उदाहरणहरुमा रिफाम्पिन, फिनोबार्बिटल, फेनिटोइन, र carbamazepine शामेल छ। खराबमा, सियालिस खुराक बढाउन आवश्यक पर्दछ। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू र फार्मासिष्टहरू यी औषधिहरूमा राम्ररी जान्दछन्, त्यसैले तिनीहरू सजिलैसँग संयोजन फेला पार्न सक्दछन् र सल्लाह प्रस्ताव गर्न सक्छन्।
कसरी सियालिस साइड इफेक्टबाट बच्ने
Cialis साइड इफेक्टको जोखिम केही सामान्य पोइन्टर्स निम्न द्वारा कम गर्न सकिन्छ:
१. सियालिसलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको हेरचाहमा लिनुहोस्
Cialis वा अन्य इरेक्टाइल डिसफंक्शन औषधिहरू एक इजाजतपत्र प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको सल्लाह बिना लिनुहोस्। सम्भावित खतरनाक साइड इफेक्टबाट बच्न, निर्धारित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले एक व्यक्ति शारीरिक शारीरिक परीक्षण र चिकित्सा ईतिहास समीक्षा गर्नुपर्छ। केही सर्तहरूको साथ व्यक्तिहरूको लागि, नियमित मेडिकल भ्रमणहरू गम्भीर साइड इफेक्टहरू वार्ड गर्न आवश्यक पर्दछ।
सर्टरलाइन काम गर्न कत्ति समय लिन्छ
२. केवल लाइसेन्स प्राप्त फार्मासिष्टबाट सियालिस खरीद गर्नुहोस्
Cialis वा अन्य इरेक्टाइल डिसफंक्शन औषधीहरू वैकल्पिक च्यानलहरू मार्फत खरीद गर्दा नक्कली वा असुरक्षित औषधिहरू खरीद गर्ने जोखिम हुन्छ। खुराक शक्ति गलत हुन सक्छ, अप्रभावीता वा साइड इफेक्टको जोखिम उठाउँदै। केवल प्रिस्क्रिप्शनबाट Cialis खरीद गर्नुहोस्, र इजाजतपत्र फार्मेसी मार्फत खरीद गर्नुहोस्, जस्तै तपाईंको स्थानीय फार्मेसी वा तपाईंको बीमाको मेल अर्डर सुविधा।
निर्देशन अनुसार Cialis लिनुहोस्
निर्धारित अनुसार खुराक लिनुहोस्। पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, र औषधि गाईड वा रोगी निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् जुन औषधिको साथ आउँदछ। फार्मासिष्ट, डाक्टर, वा अन्य स्वास्थ्यसेवा पेशेवरले कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन वा कुनै गडबड हटाउन सक्छ। सबै भन्दा बढि, तपाइँको डाक्टर संग परामर्श बिना खुराक बढाउन वा घटाउन छैन। यदि प्रभावकारिता वा साइड इफेक्ट समस्या हो भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग डोज समायोजन गर्ने बारेमा कुरा गर्नुहोस्।
The. डाक्टरलाई सबै मेडिकल अवस्था र औषधीको बारेमा बताउनुहोस्
साइड इफेक्टको जोखिमको कारण, सँधै यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि निर्धारण गर्ने डाक्टर वा हेल्थकेयर प्रोफेशनललाईaको बारे मा थाहा छny चिकित्सा अवस्था, विशेष गरी:
मुटु वा सर्कुलेशन समस्याहरू
रक्त कोष समस्याहरू (जस्तै सिकल सेल एनीमिया)
आँखा समस्या (जस्तै retinitis pigmentosa वा गम्भीर दृष्टि हानि)
विकृत लिंग आकार वा
लामो (> hours घण्टा) निर्माणको इतिहास
कुनै पनि चिकित्सा अवस्था जसले यौन गतिविधि संभावित खतरनाक बनाउन सक्छ
रक्सीको दुरुपयोगको इतिहास
सबै औषधीहरू, ओभर-द-काउन्टर औषधीहरू, पूरकहरू, र उपचारहरू लिइदैछन्
C. प्रति दिन Cialis को एक भन्दा बढि खुराक नलगाउनुहोस्
ताआलाफिल, सियालिसको सक्रिय संघटक, लामो समय शरीरमा रहन्छ। जब Cialis आवश्यक रूपमा लिईन्छ, एक खुराक (यौन गतिविधि भन्दा कम्तिमा minutes० मिनेट लिइएको लिन्छ) ले activity 36 घण्टा सम्म यौन गतिविधिको लागि अनुमति दिनेछ। Cialis लाई दैनिक खुराकको रूपमा लिँदा, प्रत्येक दिन लगभग समान समयमा खुराक लिनुहोस्।
Gra। अंगूरबाट बच्नुहोस्
Cialis खाना बिना वा बिना लिन सकिन्छ। एउटा अपवाद अंगूर हो, जसमा पदार्थहरू हुन्छन् जुन शरीरबाट ताडलाफिल हटाउने क्षमतामा हस्तक्षेप गर्दछ। साइड इफेक्टको जोखिम कम गर्न, सिआलिस लिँदा अंगूर खान वा अpe्गुरको रस पिउने बेवास्ता गर्नुहोस्।
Too. धेरै रक्सी पिउनुहुन्न
सियालिसले रक्तचाप कम गर्दछ। रक्सी पनि गर्दछ। मध्यम मात्रामा रक्सी ठीक छ, तर एफडीएले Cialis लिदा चार पेय पदार्थहरूको सुरक्षा सीमा निर्धारित गरेको छ। त्यतिखेर, तिनीहरूको अर्थ चार-औंस गिलास वाइन वा चार शट मदिरा हो। सुरक्षित मदिरा सेवनको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्, यद्यपि, तपाईंसँग अन्य सर्तहरू हुन सक्छ वा अन्य औषधीहरू लिन सक्नुहुन्छ जुन मदिरासँग अन्तर्क्रिया गर्दछ।
Ually. यौनजन्य रोगका बिरूद्ध संरक्षणको प्रयोग गर्नुहोस्
Cialis यौन संक्रमित रोगहरु को लागी रक्षा गर्दैन। उपयुक्त सुरक्षा जस्तै कन्डम र शुक्राणुनाशक प्रयोग गर्नुहोस्। चिकित्सा निर्देशनका लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
सियालिस , Epocrates
Cialis जानकारी तोक्दै , संयुक्त राज्य अमेरिकाको चिकित्सा पुस्तकालय
फॉस्फोडीस्टेरास-5 अवरोधकहरूको साथ ड्रग अन्तर्क्रिया ईरेक्टाइल डिसफंक्शन र पल्मोनरी उच्च रक्तचापको उपचार गर्न प्रयोग गरिएको, परिसंचरण
Hypotression , StatPearls
ओर्थोस्टेटिक हाइपोन्शन , StatPearls
ओर्थोस्टेटिक हाइपोटेशन: मेकानिजमेन्ट, कारण, व्यवस्थापन , क्लिनिकल न्यूरोलोजीको जर्नल
संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्नातक पुरुषहरु मा erectile dysfunction को औषधि को मनोरन्जनकारी प्रयोग: विशेषताहरु र सम्बन्धित जोखिम कारक , यौन व्यवहारको अभिलेख
मनोरन्जन भियाग्रा प्रयोग र लागुपदार्थ दुर्व्यवहार गर्ने पुरुषहरूमा यौन जोखिम , संक्रामक रोगहरूको अमेरिकी जर्नल
Synergistic (MARATHON) को साथ संयुक्त methamphetamine का यौन उत्तेजक ड्रग्सको साथ उच्च जोखिमको यौन व्यवहारको सम्भावना बढाउने प्रभाव , लत र स्वास्थ्य
न्यानटेरिटिक एन्टेरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपेथीको उपचार , नेत्र विज्ञान को सर्वेक्षण
PDE5 अवरोधक ,स्ट्याटपर्लहरू
ताडालाफिल , प्लम्बको पशु चिकित्सा दवा गाइड
Tadalafil मिश्रित सारांश ,संयुक्त राज्य अमेरिकाको औषधि पुस्तकालय
के एप्पल साइडर सिरकाले वजन घटाउन सहयोग गर्न सक्छ?
म tollenol बेलुका zoloft संग लिन सक्छु?
के तपाई नेबुलाइजर धेरै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईले योजना बमा सम्म कत्ति समय लिन सक्नुहुनेछ
खमीर संक्रमणबाट छुटकारा पाउन प्राकृतिक तरिकाहरू
गर्भवती भएको बेला तपाई फ्लू हुँदा के हुन्छ
रगत पातलो र रक्सीको साइड इफेक्ट